Uphi iDataPoint kwiPowerPoint? - Faq
Eyona > Faq > I-Datapoint ye-PowerPoint-indlela yokusombulula
I-Datapoint ye-PowerPoint-indlela yokusombulula
Uphi iDataPoint kwiPowerPoint?
Qalisa iMicrosoft yakhoIpower Pointisicelo kwaye uqale ngomboniso omtsha.
Cofa ukuvula iIdathaPointithebhu.
Kwiqela lodibaniso, cofa kuLuhlu iqhosha ukuvula uqhagamshelo lwedatha.
Oku kuvula ifom apho ungalawula lonke unxibelelwano lwedatha yale ntetho.
Songeze umsebenzi omtsha kwindawo yethu yedatha. Indawo yedatha yemveliso ikuvumela ukuba unxibelelanise iifom zakho ezivulekileyo kwimithombo yedatha enjengeefayile ze-Excel, iziseko sedatha, idatha yeXML, njl.
Ngomsebenzi omtsha, ngoku unokwenza amaxwebhu ngamanye kunye nomxholo wesiko, ke ngoku unalo uxwebhu lwesiko labathengi umthengi ngemveliso yelizwe ngalinye, njl.njl. Olu xwebhu luvelisiweyo ngumboniso wePowerPoint ngokungagqibekanga, kodwa unokugcinwa njengeSilayidi sePowerPoint okanye amaxwebhu e-PDF okanye athunyelwe njengemifanekiso kwifolda ethile yesizukulwana Ke ukuba unekhonkco elihle le-PowerPoint kulwazi lwakho, yenza inani elingenamda lenkcazo eyenzelwe wena ngonqakrazo olumbalwa kule rekhodi, sinesampulu yentshumayelo apho senza khona kwaye sonyusa ukwanda konyaka kubasebenzi bethu, kodwa oku kunokuba UXwebhu lomthengi wethu wenkampani yeinshurensi okanye yebhanki okanye iziphumo zesikolo zomntwana Uncedo lwentetho eyenziweyo kunye neyenzelwe wena kukuba ikwifomathi yePowerPoint kunye noopopayi kunye notshintsho kunye nokuzenzekelayo okanye ukuqhubela phambili kwezilayidi zakho.
Idatha ekrwada ikwi-Excel yakho okanye kwindawo yogcino lwedatha kwaye iintetho zenziwe kwiPowerPoint, apha sinesampulu yedatha yethu, apha sinoluhlu lwabasebenzi kwaye kwinqanaba lomgca sibona iziphumo, amanqaku emibuzo eyahlukeneyo, njl.njl. isilayidi ezininzi ezijikeleze ii-Sc ores kunye nezichazi ezibhaliweyo njl.njl. senze unxibelelwano kwifayile yethu ye-Excel kwindawo yedatha, usebenzisa indawo ethile kwifayile ye-Excel, ukuze ungenise idatha, ngenxa yoko sisebenzisa le datha kwicandelo lokubhaliweyo, ke apha sinendawo yokubhaliweyo, cofa kwibhokisi yokubhaliweyo kwaye siyabona ukuba olu lwazi lunxulunyaniswe nomhlaba wegama lomphathi okanye ikholamu yomgca wenombolo 1 Kulungile kwisilayidi esilandelayo sinepesenti apha eza nayo ngokwayo Kulungile, yeyonikezelo, ukuba ngoku ndicofa umfanekiso ocacileyo uthi khawuleza, oku kundinika indlela yokhetho kwinkqubo yokuvelisa kuqala ndikhetha ikholamu ngakumbi igama lefayile, kuba amaxwebhu avelisiweyo abizwa njenge le com ivela kwiziko ledatha lethu okanye iphumelele ifayile, ke sinekholamu ekhethekileyo yeli gama lomphathi endikhangela kwifolda yam ekujolise kuyo apho imiboniso evelisiweyo iya kugcinwaCheckbox ukucima imixholo kwifolda kuqala, ngaphambi kokuba siqale ukuvelisa amaxwebhu kwaye ndikhethe ifomathi yefayile endiyikhethayo uxwebhu lwePDF lwegama lefayile ndinokubeka isimaphambili segama lomphathi kunye nesimamva sesicatshulwa emva kwegama lomphathi kunye nomzekelo ngoku ungabona imbonakalo yegama lomzekelo apha kuvavanyo lonyaka lweDeborahScott 2015 PDF ukuze Uxwebhu luvelisiwe luxwebhu olunegama, ke ndicofa ngoku ndilumkisiwe ukuba iifayile ziya kucinywa kwifolda kwaye ngoku iPowerPoint okanye iDatapoint yenza amaxwebhu ahlukeneyo, uxwebhu lulawulwe kwaye ulwazi luqinisekile ukuba iPDF Uxwebhu ngoku sele lukulungele onke amaxwebhu aveliswe ngomxholo wesiko, apha ungabona uxwebhu lokuqala endilivulayo kwaye mandivule uxwebhu lwesibini kwaye uyabona ukuba umxholo wahluke ngokupheleleyo kulomntu. , ulwazi oluthe kratya malunga namanqaku edatha kwindawo yethu
Yeyiphi eyona ndlela ilungileyo kwiPowerPoint?
I-9Eyona PowerPointIsoftware yoPapashoEzinye iindlela
Prezi. U-Prezi uhluke kakhuluIpower Pointnjengoko unokufumana. ...
Ngaphaya. Kumashishini onke, ividiyo ibonakalisiwe ukuze ibambe ingqalelo kwaye ibandakanyekengconokunamajelo amaninzi. ...
Umboniso weZoho ....
Izilayidi zikaGoogle. ...
Idiksi yeHaiku ....
IPowerPoint ifile. Ndiyabulela uthixo kukho into ebhetele. Ukwenza umboniso ongcono, ukusebenzisana.entlalontle ... unomdla? Zama prezi.com Eli nqaku liyacacisa.
amanani e-gwx kb
Namhlanje, ndingathanda ukuthetha ngesixhobo esiyintshatsheli esisisebenzisa kuTim Levy ngalo lonke ixesha elinxulumene nazo zonke izixhobo zethu zokubonisa. Ibizwa ngokuba yiPrezi kwaye ndicinga ukuba yinto elandelayo, ukuba uyathanda, kwisithethi nakunxibelelwano lolwazi emva kwePowerPoint. IPowerPoint ilayini kakhulu, incinci kakhulu kwaye iPezi, esekwe kumbono wengubo engenasiphelo, kubonakala ngathi sisizukulwana esitsha nesilandelayo.
Ayisiyonto yangaphakathi kuphela engenanto ethetha ukuba ungasondeza ngaphakathi nangaphandle, ikwadityaniswa neenethiwekhi zentlalo eziluncedo kakhulu. Kuphela andinguye yedwa umntu ocinga ngoluhlobo, lo mzobo ubalisa ibali. Oku kukubonisa ukuba kwisithuba seminyaka embalwa bafikelele kubasebenzisi ababhalisiweyo abazizigidi ezingama-26 abenze ngaphezulu kwe-500 yezigidi iintetho ze-Prezi kwi-Intanethi, kwaye yaduma ngakumbi xa isetyenziswa kwezinye zeTed Talks eziyimpumelelo.
Enye into malunga nayo, ewe, kukuba isimahla. Ukuyisebenzisa nje, ukuba nje wabelana ngeenkcazo-ntetho zakho, isimahla ukuyisebenzisa kwaye, njengoko benditshilo, iqhagamshelwe kwinethiwekhi yoluntu. Makhe sijonge eminye yemizekelo ethile kwaye ndiza kusayina kwaye sizokubonisa ezimbalwa zeentetho zethu, zonke ezifumaneka xa sikwi-Intanethi Makhe sijonge ngokukhawuleza kwezi, zintsha, ekubhekiswe apha njengeNcwadana ekhawulezayo yeNcwadi.
Le yindawo yokubonisana endiyinike amaxesha aliqela kwaye into oyibonayo apha iya kwiscreen esigcweleyo kukuba sisikrini sokuqala na xa ndibetha nje izitshixo eziza kuhamba. Ngokukhawuleza yondliwe ngaphakathi, njengoko benditshilo, inani elingenasiphelo lokusondeza ngaphakathi nangaphandle, ndiye ndasondeza kweli tyala ukuqala ngokwenza umthambo endikhokela abaphulaphuli kwaye ndisondeza kwitafile yokuqhubeka kule meko jikeleza , ujikeleze. Yeyona nto intle malunga nayo, uvakalelo olumangalisayo lokuhamba olufumanayo.
Kodwa eyona nto ipholileyo kukuba ayixhomekekanga kulandelelwano lweziganeko ezinje ngePowerPoint, ukuba ndifuna nje ukuhambisa imouse yam ngapha nangapha okanye ndifuna nje ukungena kwisilayidi esithile, ndinako. Zoom out, zoom in. Linda, ndikwindawo engeyiyo, nqakraza kuyo.
Yima, ndifuna ukusondela. Zonke ezi zinto zinokwenzeka. Into endiyithandayo ngokusebenza noPrezi kukuba ikuvumela ukuba useke uhlobo oluthile lweparadigm ebonakalayo.
Kule meko, iparadigm ebonakalayo isebenzisa into yokunxiba phambi kwebhodi. Ndiyile izikrini kwaye ndacima ngaphakathi nangaphandle kwesikrini kunye nazo zonke iintlobo zezinto. Uninzi lwabantu lundibuza ukuba ndingazifumana phi ezi paradigms ezibonakalayo.
Kuya kufuneka ndiskrolele kwenye iwebhusayithi endiyisebenzisela le nto, iwebhusayithi yemizobo endiyisebenzisa ngenene kakhulu ebizwa ngokuba yi-123RF kwaye sinenqaku elahlukileyo apho ukuba ufuna ukufunda okungakumbi, namhlanje ndibhalisela nje ukuze ndikwazi ndingaya kwiakhawunti yam kwaye ndibone ukuba ndingajonga nakuphi na ingqokelela yam endinayo apha, ndinazo ezi, bazibiza 'njengeebhokisi' ezinemvelaphi yePrezi endizingelayo ndaza ndayifumana ngokuhamba kwexesha, kwaye bona zininzi iiparadigms ezibonakalayo apha ngaphandle ukuba awufuni ukuzenzela. Setha ifoto kwaye wenze oko. Umzekelo, oku kungapha komzobo weekhyubhu ezingaphakathi, igama eliphambili elinobuqili ngokuqinisekileyo, Yintoni omele ucinge ngayo ukuyichwetheza kwibhokisi yokukhangela apha e-123RF, kodwa xa uyenza iza nesiphumo esinye kunye ufikelele kweso siphumo, siqala emazantsi, uyakwazi ukubonisa imifanekiso efanayo enezinye iiparadigms ezibonakalayo.
Inika uhlobo oluthile lwesiseko ukuqala nge-123RF, kwaye xa sibuyele kwi-Blurb uya kuyibona le nto ibenye ye-Prezis yam isekwe kuyo. Ndicinga ukuba le inye isekwe kubuchule bokwenza izinto. Kulungile, kujongeka ngathi andinako ukuyilayisha kwiseva yePrezi okwangoku, ke ndiza kukubonisa eli xesha elizayo.
Nokuba yeyiphi na indlela, le yiPrezi, sisixhobo esimnandi, umboniso omkhulu non-linear kunye nesixhobo sonxibelelwano, kunye nendlela yokufumana iparadigm ebonakalayo ebonakalayo ene-123RF kwaye ngendlela yokuba icace, iPrezi isimahla. Ungahlawula imali ezinkozo kwiinguqulelo zedesktop. Apha e-123RF ungabona ukuba sele ndiwuthengile loo mfanekiso, kodwa uyazi ukuba i-5, 6 yeedola, mhlawumbi i-10 yeedola zithengiwe umfanekiso owufunayo ku-Prezi.
Masihambe. Prezi. Ukhetho lwam olupheleleyo ukuba lumalunga nezixhobo zokubonisa kunye nenkxaso yesithethi.
Ndiyenza njani ukuba isebenze iDataPoint?
Khetha iFayile> Khetha, emva koko ucofe u-Faka. Kuluhlu lokuLawula, cofa ii-Add-ins ze-PowerPoint, emva koko ucofe u-Yiya. Kwibhokisi yencoko yababini yokongeza, cofa Yongeza eNtsha. Kwibhokisi yencoko yababini yokuNgeza iPowerPoint eNtsha, khangela ukuba ifayile yeIdathaPoint, emva koko ucofe u-Kulungile.18 kweyeThupha. Ngo-2018
Ukunxibelelana ngomnxeba Uninzi lweenkqubo zeefowuni ezincinci ukuya kweziphakathi namhlanje azinakho ukubonelela ngeshishini lakho ngeempawu eziphucukileyo kunye nezibonelelo zoqoqosho ezinokufunyanwa ngamashishini amakhulu kwiinkqubo zefowuni ezixhotyisiweyo zePBX ezinokukunika ukonga iindleko ngokuthe ngqo ngezinto ezinje ngexabiso lokufowuna Ugcino 40 lokuGqithisela umnxeba inkomfa yomnxeba kunye nokulinda ngokuphucula unxibelelwano phakathi komsebenzisi nenkqubo, kukhokelela kwimeko yokusebenza efanelekileyo. Kude kube kukwaziswa kwenqaku ledatha k sx, le misebenzi ibifumaneka kuphela kwiinkqubo ze-EPABX ezibiza kakhulu kwishishini lakho. Inqaku ledatha i-KS ex yinkqubo ephucukileyo, egcinwe kwimemori yedijithali yee-ofisi naphi na apho ukoneliseka kunye nokukhula okunokubakho.
Indawo yedatha k sx ibonelela ngezikhululo zababhalisi ezingama-82 128 ngenkqubo yesitshixo esintsonkothileyo esisombulula iingxaki zemihla ngemihla zomsebenzisi weenkqubo eziphambili eziphambili Phambili ukudayala kwamanani asixhenxe kuye kwali-10 Ukuphelisa ukusebenza kwefowuni okusebenzayo sisizathu esaneleyo sokujonga inqaku ledatha ye-KS, kodwa lula Abaphathi abaninzi namhlanje bakholelwa ukuba ixabiso lonxibelelwano ngomnxeba yinto enye yenyani yeshishini yinkqubo eyimfuneko ukubenza bahlawule inqaku ledatha yexabiso litshintshile loo nto engqondweni kunye neemveliso zethu zolawulo zonxibelelwano. Ulwazi oluneenkcukacha lomsebenzisi kwiindleko zomnxeba ngamnye kunye nenye idatha oyifunayo ukukunceda ukuthoba iindleko zakho zefowuni zizonke Ukuzinikela kwethu ekusebenziseni inkqubo yefowuni yakho kwahlukile ngokwenene Ukonga iindleko ngokuthe ngqo zeKS ex zivela kubuchule bakho bokunciphisa umda wokusetyenziswa komgca kunye nokuthintela ukusetyenziswa gwenxa kuguquguquko loyilo lweemodyuli likuvumela ukuba uqwalasele inkqubo ukuya kubungakanani obuyifunayo ngoku, ukunqanda ukubiza okungaphezulu amabakala kunye nokuphuculwa kwenkqubo, inkqubo yexesha lokuphumla iyancitshiswa kakhulu kukukwazi kwamanqaku edatha ukwenza izilayidi ezikude gnostics kunye nolondolozo lwedatha Okokugqibela, indawo yedatha k SX inikezela umnxeba wokukhetha iingxelo ezinokubonelela ngedatha yokusetyenziswa kwenkqubo yeendleko ezingaphezulu Ulawulo lungenza njani ukuba inkqubo encinci ikunike izibonelelo ezininzi? Makhe siqwalasele izinto ze-ks X Intliziyo yenkqubo sisilawuli esilawulwayo S Iyunithi yenkonzo engundoqo ye-KSU Uyilo lwebhodi yesekethe ye-KSU yenza ukuba umsebenzisi aqwalasele ubungakanani benkqubo efunekayo kwaye kwangaxeshanye vumela imveliso yexesha elizayo yezitishi kunye nemigca njengoko kufunekaIyunithi yenkonzo ephambili iMicroprocessor ilawula ukusebenza kwesikhululo Ukufikelela kwimemori kunye neepheripheripsi zekhadi.Imemori khadi engahambelaniyo igcina iinkqubo zenkqubo kunye nomthengi ngamnye ngokhetho oluchaziweyo lokutshintsha ixesha ledijithali ungalindeli ukuba umsebenzisi aphuhlise isantya esiphezulu sokutshintsha iipropathi zamasekethe wesekethe nganye ngenkxaso ukuya kwi-eig ht izixhobo zomnxeba zenkqubo zizonke izikhululo ezili-128 zamakhadi wesekethe ezilawula ukuya kuthi ga kwimigca yokutshintshiselana ezi-4 ezinemigca yokutshintshiselana engama-32 ubuninzi kwimigca yokutshintshiselana nganye engama-24 enokuthi ikwazi ukumelana neendlela ezimbini zeofisi kunye neendlela ezisibhozo zendlela enye yokongezwa okulula ukwandiswa okanye iitrunk amakhadi avumela umsebenzisi ukuba andise ngokwandayo inkqubo yabo njengoko izixhobo ezininzi zenziwe n ziyimfuneko i-ks X yenzelwe ukuxhasa ukuya kuthi ga kwiiseti eziphambili ezingama-24 ezingama-24 iifowuni ezilawulwa ngekhompyuter ezinye izixhobo zokungenisa ngombane iseti ephambili engu-24 ingaphakathi I-microprocessor-elawulwa ngomnxeba wephedi enezitshixo ezingama-24 kunye nezitshixo zomsebenzi okhethekileyo kunye neqhosha lokudayela eliqhelekileyo leeyunithi zemakrofoni ezijolise kubasebenzisi zinika uluhlu olupheleleyo lwemisebenzi enjengezandla ezingenasandla ezimbini kunye nenkqubo ye-intercom enamanani amathathu kunye neshumi elinokucwangciswa ngumsebenzisi. iinombolo zokucofa ezifinyeziweyo; amaqhosha omsebenzi okhethekileyo avumela umsebenzisi ukuba abize ukhetho lokuhambisa; Esi sixhobo senza ukuba umqhubi abone krwaqu Khangela ukuba loluphi ulwandiso olusetyenziswayo kwaye avumele nayiphi na ifowuni engenayo ukuba ihanjiswe ngokucofa iqhosha. Izibini ezintathu zekhabhathi jikelele kunye neemodyuli ezivumela ukuba kube lula ukufakelwa isixhobo sokutshintsha kunye nokuphucula Masikuthathe ngokukuko ekusebenzeni kwayo, i-KSex ayiniki kuphela ukufikelela kwimigca yangaphandle enje ngemigca yomthi, kodwa ixhasa inethiwekhi eyakhiwe ngumsebenzisi yokwenene ukufikelela kwi-intercom ye-KS Ex. Into ekufuneka uyenzile kukuthatha i-handset kwaye i-intercom ilungile.
Akukho sitshixo se-intercom, ukuba ufuna ukuthetha nomntu osebenza naye, ngenisa inombolo ye-intercom emibini okanye emithathu kwaye inkqubo izakukhetha ngokuzenzekelayo enye yeepads ze-intercom ezisibhozo kwaye iphelise umnxeba kwisiphelo sokufumana. uve umnxeba we-intercom ongenayo xa umbhalisi ecofa umnxeba ongenayo unokuphendulwa ngaphandle kwezandla usebenzisa umsebenzi wesikhululo esingenazandla isibane semakrofoni kwiseti ebonisa umnxeba owamkelweyo kwimowudi engenasandla nangaliphi na inkqubo ye-intercom. Yonke imnxeba yeofisi yangaphandle inokhetho lokutshintsha phakathi kwefowuni kunye nomsebenzi ongenasandla ukuba enye ifowuni ye-intercom yenziwa kulwandiso olusetyenziswayo ngexesha lencoko, kufunyenwe uphawu oluvakalayo nolubonakalayo ukubonisa ukuba umnxeba ulindile xa umnxeba awamkelwa kwangoko, ungabekwa kulayini wokulinda umnxeba ukuba umthumeli ukhetha ukuba ulwandiso lubizwe ngokuzenzekelayo xa iqela elibiziweyo lifumaneka okanye umnxeba wangaphandle unokwenziwa ngomgca wangaphandle.
Nje ukuba umnxeba ugqityiwe, umnxeba obanjiweyo uphinde uqhagamshelwe ngokuzenzekelayo Lo msebenzi uxhomekeke kubuchule benkqubo yokusebenzisa yonke imigca efumanekayo kwisikhululo Ukuguquguquka kolu setyenziso lomsebenzisi lujolise eofisini. Unxibelelwano lweofisi Umsebenzisi ofuna ukwenza umnxeba wangaphandle kufuneka acofe elinye lamaqhosha emigca kwaye acofe inombolo, ukuba yonke iMigca efumanekayo kumsebenzisi ixakekile umntu ofowunayo unokukhetha ukuba ne-ks X ngokuzenzekelayo iphinde ibuye iyunithi yemakrofoni xa umgca uya kukhululeka ukuba inani elibiziweyo lixakekile linokufowunelwa kwakhona ngokuzenzekelayo ngokucinezela iqhosha lomsebenzi lenkomfa umnxeba obalulekileyo kuyo nayiphi na inkampani ngokucinezela Isitshixo somsebenzi esenza ukuba abantu ababini abaseofisini bathethe nomnxeba wangaphandle okanye Ababini abafowunayo bangaphandle babambe inkomfa nomntu omnye. Enye yezinto ezingalindelekanga kwinkqubo yefowuni eqhelekileyo kukudluliselwa kwendawo yedatha k sx yenza ukuba i-Wei Routing nayiphi na ifowuni ephumayo okanye engenayo iye kolunye ulwandiso ngendlela efanayo nefowuni engenayo enokudluliselwa kulwandiso kwaye ibambe ukuba umnxeba wokudlulisa awuphendulwanga d kumda othile wesiko eliya kuthi libuyisele ngokuzenzekelayo kulwandiso ebeligqithisela umnxeba othunyelwe kulwandiso oluthile okanye ukubamba kungathunyelwa kolunye ulwandiso ukuba luyafuneka olu phawu lokudlulisa luluncedo lokwenyani kubasebenzisi xa bethumela iminxeba kubantu abathile abakwinkqubo, kodwa kuthekani ukuba umntu omnye akaphenduli ulwandiso lwakhe I-Theks X ibonelela ngeendlela zokupakisha ngaphakathi nangaphandle kunye nendawo yemiyalezo yokupakisha kwangaphakathi ivumela umsebenzisi ukuba ahlule iofisi yakhe imimandla emithandathu ngokufaka ikhowudi kwiqhosha elinikezelweyo, okanye zonke izitishi ezingasebenziyo kule mimandla zinamagqabi ngokusebenzisa indawo yesikhululo esingenazandla Dana Ngokwesiqhelo, umnxeba Umqhubi wenkqubo ye-ephone uqokelela imiyalezo yabantu abakule nkqubo, kodwa nge-ks X iziko lomyalezo elahlukileyo kunye nolwandiso lwalo linokumiselwa ukuba lifunwa, umsebenzi okhethekileyo kwisixhobo somsebenzisi odanyazayo xa umyalezo umlindile Iziko lolawulo lomsebenzisi kwinkqubo lifuna kuphela ukucofa isitshixo somsebenzi ukufikelela kwiziko lolawulo nokufumana umyalezo wakhe. I-KS ex yaphuhliselwa ukusebenzela wena hayi ngokuchasene neemfuno zakho zangoku zomsebenzisi, kunye neempawu ezisusela kuringitshisi onokuhlengahlengiswa kunye ulawulo lwevolumu yokufaka izinto ezintsonkothileyo ezikuvumela ukuba ucime ifowuni yakho xa ungafuni kuphazanyiswa sisakhono sokusebenzisa imisebenzi ethile ukongeza kwisikhululo, ucime okanye utshintshe r ikwenza ukuba ulungelelanise inkqubo yoqhakamshelwano lweofisi yakho ngqo iimfuno ngexesha lofakelo; Indawo yedatha eqeqeshiweyo iya kuqwalasela i-KS ex yakho kunye nemisebenzi yokusebenza efanelekileyo kakhulu kwiimfuno zakho ezithile, izithintelo zemigca, ulwazi ngeenkcukacha zomnxeba, imimandla yokubheja, ulwabiwo lomsebenzi, amaxesha okubuyela umva kunye nezinye iindlela ezininzi azikhawulelwanga kuqwalaselo lwakho lokuqala. Inkqubo ukuba iimfuno zakho ziyatshintsha, ukwenzela ukuba i-ks kwaye ngaphandle kokuphazamisa inkqubo yovavanyo lokuchonga iinkonzo kwi-KSU inokwenziwa kude kwindawo yedatha yololiwe. Abasebenzi beenkonzo banokufumana ngokukhawuleza nayiphi na into enesiphene kwinkqubo ngokuvula umnxeba ngqo kwi Iziko leNkonzo leSizwe Ukuthembeka kwenkqubo kuqinisekiswe ngamanyathelo okulungiswa kwangoko kwaye ke kuthintela amaxesha amade enkqubo.
I-Datapoints uthungelwano lwesizwe lokuthengisa okufanelekileyo kakhulu kunye nabasebenzi beenkonzo I-Iters zikulungele ukubonelela ngenkxaso efunekayo yokugcina inkqubo yakho isebenza kwincopho yokusebenza iiyure ezingama-24 ngosuku, iintsuku ezingama-365 ngonyaka, naphi na. E-US, i-ks X Keyswitching Exchange yinxalenye usapho lwedatha yeemveliso zonxibelelwano ngemfonomfono egubungela uluhlu olupheleleyo lweemfuno zeshishini. Kwiimfuno ezinkulu kunye nezifuna kakhulu, indawo yedatha X inokuhlangabezana nazo zonke iimfuno zokuhanjiswa kolwazi lweenkampani eziphakathi ukuya kwezikhulu kunye neefowuni ezili-100 ukuya kuma-20,000 ezixhasa ii-terminals zethu zenqaku. U-X ubonelela ngomjelo wazo zonke iintlobo zolwazi lwedijithali, idatha yezwi, isicatshulwa imiyalezo kunye noyilo lweemodyuli ngakumbi, ufakelo olulula kunye nolawulo lweekhompyuter zisebenza kunye ukuze zinikeze yonke inkampani encinci ukuya kubukhulu obuphakathi inzuzo eyandisiweyo, eyandisiweyo yomthengi. I-m-Design kunye nenkqubo ephambili engabizi mali inikezela umsebenzisi ks x ubukho bendawo yedatha X inika ithuba lendlela yoqoqosho, ephantse ibe ngumda wokukhula
Yintoni isifinyezo somboniso wePowerPoint?
Ngaba ufuna ukwenza intetho? Ngaba uyayithiya imiboniso? Ndiyazithanda iintetho, kodwa inye into onokuthi uyenze kakuhle kukudala intetho ye-PowerPoint kuba unezixhobo ezibonakalayo zokukunceda ungathethi kakhulu xa unovalo ngayo. Izakhono zokubonisa yinto ekufuneka isebenze kuyo. Sinamanqaku ku-www.engvid.com ukukunceda ngezakhono zakho zokubonisa.
Ke jonga ezi ukuze ufunde indlela yokuthetha ngexesha lokwenziwa. Kodwa into esiza kugxila kuyo namhlanje yinto ebonakalayo yenkcazo, izinto zakho zePowerPoint. Ezinye izinto zokwenza kunye nezinye izinto bekungafanelekanga ukuba uzenza.
Ke silapha, izakhono zokubonisa. Eyokuqala kunye nenye yezinto ezenza ukuba ezi ntetho zibe mnandi yimifanekiso. Kodwa kufuneka silumke.
Iitemplate osele uzenzile kwisoftware yakho yokubonisa ziyadika. Abantu bazisebenzisa ngalo lonke ixesha. Ke ndicebisa ukuba uzame ukukhuphela eminye imifanekiso ukwenza intetho yakho ibenomdla ngakumbi.
Ngelixa usenza oku, qiniseka ukuba unomfanekiso kwisilayidi. Yenze ibe nomdla. Sukuba nescreen esahluliweyo.
Ke, awunayo imifanekiso emibini kwisilayidi esinye. Hayi ikholaji, yinto ephambeneyo leyo. Ikholaji yenziwe ngemifanekiso emininzi eyahlukeneyo kwiscreen.
Nokuba ndibona ikholaji, ngoku zininzi iikholaji eziphuma kuFacebook kwaye ndicinga ukuba, 'Imifanekiso emininzi kakhulu. Andiqondi. ' Iingqondo zethu azinakuyiqonda yonke le mifanekiso, ngakumbi xa usilayida isilayidi ixesha elifutshane.
msvcp100.dll umphunga olahlekileyo
Sukwenza njengecwecwe lefoto. Musa ukubeka izigidi kunye nemifanekiso esixhenxe kwaye ... yigcine ilula.
Beka umfanekiso omnye kwisilayidi ngasinye. Zama ukukhetha imifanekiso oyithandayo kwaye engaphazamisi. Awufuni njana kunye nezinto.
Yenza into elula kodwa into oyithandayo kwaye ibonakale intle. Okulandelayo, kuya kufuneka unakekele unobumba. Ke, unobumba onokuthi wazi njengomgca.
Ifonti kunye ne-typeface ngoko ke ziyafana. Inye kuphela into ongafuni kuyenza kukuthanda okanye ukubhala iileta ezintle. Ngokucacileyo ... isizathu kukuba xa oonobumba bebukeka, abanye abantu abakwazi ukufunda, ngakumbi ukuba wenza intetho kubantu ... abangenaso isiNgesi njengolwimi lwabo lokuqala, ukuba uthatha iileta kwaye uzenze nokuba zikekelise, Abantu abaninzi banengxaki yokufunda ubhalo olukekeleyo.
Ke, ndicebisa ukuba usebenzise enye into ngokwesiko. Zininzi iifonti ekulula ukuzifunda onokuzisebenzisa kwi ...
Nokuba yeyiphi na iprosesa yamagama oyisebenzisayo. Yenza kube lula kwaye ifundeke lula. Enye ingxaki onokuba unayo kukuba iskripthi sikhulu kakhulu okanye sincinci kakhulu.
Ke gcinani engqondweni ukuba uya kuba wenza intetho yakho kwiLaptop yakho, kwi-desktop, kwi-iPad okanye kwifowuni ukuze ifonti okanye unobumba uya kwahluka kunangexesha lokuyibeka kwiprojektha. Ke ukuba unako, jonga kabini ngaphambi kokuba unike intetho. Jonga eyakho ... iplagi kwiLaptop yakho okanye nantoni na kwaye ubone ukuba ungayibona kwiscreen kuba ifonti yahlukile.
Unokucinga ukuba bubungakanani obulungileyo kwiLaptop yakho, kodwa xa kufikwa kwisikrini sokubonisa, sincinci; okanye ithatha indawo enkulu kakhulu kwaye inkulu kakhulu. Emva koko kuza amagama okanye isicatshulwa. Ke kwenziwe uphando malunga nokuba mingaphi imigca yokubhaliweyo umntu anokuyifunxa okanye ayiqonde, kwaye ukuba ingaphezulu kwesithandathu, abantu balahlekile.
Ke zama ukugcina umfanekiso olula kakhulu kunye nesicatshulwa esicace gca kwisilayidi ngasinye kwaye ubeke kuphela imigca emibini okanye emithathu kwisilayidi ngasinye. Musa ukubeka iingongoma zebhulethi. Ukuba unemigca engaphezulu kwesithandathu okanye amanqaku ebhulethi, emva koko ...
Asinakubakhumbula bonke. Siphulukana nokujolisa. Sinento ebizwa ngokuba nolwazi oluninzi, ulwazi oluninzi, i-TMI. 'Ulwazi oluninzi' luthetha ukuba ukuba kukho ngaphezulu kwemigca emibini okanye emithathu, asiyiqondi nje.
Iingqondo zethu azikwazi ...
Asinakufunda nje ukuba ufuna njani. Enye into ebaluleke kakhulu yimibala oyisebenzisayo. Ngoku kumnandi ukuba nemibala eyahlukeneyo, iyasinceda ...
Njengoko ubona ebhodini, iyasinceda ukwenza umahluko kunye nokuqaqambisa amagama okanye izinto ocinga ukuba zibalulekile kodwa xa unemibala eyahlukileyo kwigama elinye unegama ...
Ngaba ungalifunda elo gama? Oko kwenza ukuba kube nzima nyani ukufunda. Eli gama lithi 'lahlukile' kwaye ukuba ubukele inqaku ekhaya ungangakwazi ukubona u 'i' okanye u 'e'. Oko kujongeka kubuntwana kakhulu.
Xa singabantwana sinokwenza imibala eyahlukeneyo kwaye kumnandi, kodwa intetho yakho ayiyiyo eyabantwana. Akufanele ukuba kube mnandi. Ufuna isihloko kunye namagama kube lula kakhulu ukuwafunda.
Awufuni ukuba babe nzima, kwaye awufuni abantu bahluphe amehlo abo ukuze babone ukuba leliphi igama. Andinakuze ndiyilibale ititshala yam yobugcisa yebanga lesi-4 indixelela ukuba awusoze usebenzise imibala eyahlukeneyo kwigama. Xa ndandineminyaka esi-8 ubudala, ndabuya nje.
Ndacinga, 'Owu thixo wam, ndisebenzisa imibala eyahlukeneyo ngalo lonke ixesha, Mnu. Riley.' Hayi.
Ke, ndiyayikhumbula. Enkosi, Mnu. Riley, ukuba uselapha ngokundifundisa esi sifundo sibaluleke kangaka.
Kodwa ungasebenzisa umbala owahlukileyo, umbala owahlukileyo ukwenza igama ligqame okanye livele. Ke apha ngezantsi ungasebenzisa umbala owahlukileyo ukuqaqambisa amagama abalulekileyo. Njengoko ubona, ndifuna ukuba ugxile kwaye ugxininise kwigama elithi 'one'.
Amanye amagama ndihlala ndimnyama. Ke umbala owahlukileyo uya kuyinceda ibonakale okanye ime ngaphandle. Ukuba usebenzisa imibala emininzi siphinde - uxolo - sididekile.
Ndiyafa. Umntu othile undifunele iAlka-Seltzer. Into yokugqibela kukuba ufuna umahluko onamandla koonobumba kunye nemvelaphi.
Ukuba umbala wam ongasemva uluhlaza okwesibhakabhaka andifuni ifonti eluhlaza kuba eluhlaza kunye noluhlaza okwesibhakabhaka yimibala efanayo, imibala efanayo. Ke kuya kufuneka uqiniseke ukuba xa unemvelaphi engwevu, ufuna into ebonakalayo ebonakalayo. Kuya kufuneka unikele ingqalelo kwimibala oyikhethileyo kwimvelaphi kunye nonobumba.
Ke ukuba ungagcina ezi ndidi zine ziphambili engqondweni xa usenza okanye usenza ... umbala, gcina kulula.
Umbala omnye okanye emibini eyahlukileyo imnandi. Qinisekisa ukuba amagama okanye isicatshulwa sinqunyelwe kumanqaku amabini okanye amathathu aphambili. Ufuna ukuhlela intetho yakho endaweni yokuphosa nje ulwazi ebantwini.
Iqela lasekhaya aliyi kuqhagamshela
Qinisekisa ukuba unobumba ucacile, akukho nto iphambeneyo, qiniseka ukuba ayinkulu kakhulu, ayincinci kakhulu. Kwaye uqiniseke ukuba awugcini ngaphezulu kwabantu ngemifanekiso njengoko indawo yakho yokwenyani iya kulahleka. Ukuba ufuna uncedo ngokubonisa, jonga amanqaku eendlela zethu zokubonisa ku-www.engvid.com kwiYouTube, ndiphuma apha.